LAHATSARY Ny Comco Ikarus C42 Red Cross FSX & P3D - Freeware
Anarana iombonana amin'ny Vokovoko Mena
Como Ikarus C42 Red Cross FSX & P3D
Io dikan natao ho an'ny FSX & P3D, Mba misintona ny dikan-mifanaraka amin'ny FS2004 kitiho eto
Isaorana i Joel Soler, Tale Mpitantana ny Arc-en-Ciel fandidiana sy ny fitiavany ny nandositra, ny frantsay Vokovoko Mena-tolotra ny manan-kilema ankizy sy olon-dehibe ny fahafahana hahita ny fifaliana ny fiaramanidina sambo iray Icarus C-42 Ultra-Fahazavana.
Arc-en-Ciel ny tanjona dia ny hanatsarana ny mety ny olona rehetra. Izany no tena asehon'ny ny mafy-miasa ekipa: 70% ny Arc-en-Ciel ny mpanamory dia ao amin'ny toe-javatra ny kilema (marenina, paraplegia ..)
Izany dia miaraka amin'ny hafanam-po fa faly manambara Rikoooo ny (www.Rikoooo.com) Fiaraha-miasa miaraka amin'ny Arc-en-Ciel!
Mr. Erik Bender, Mpamorona ny malaza "Rikoooo" vohikala ho an'ny fiaramanidina sy ny sidina simulation tia, sy Mr. Thomas Guiart nanaiky an-tsitrapo ny fangatahanay ary namorona fandokoana marina an'ny C42 Ikarus, voaravaka loko sonia an'ny Red-Cross. Misaotra an'i Andriamatoa ihany koa Byron Warwick fa ny 3D modely.
Misaotra ny fahafahana mandefa maimaim-poana atolotra ao amin'ny tranokala, misy olona afaka mampiasa an'io ilay tokana sy Red-Cross 'Ikarus tokana manana traikefa an-tserasera amin'ny fiaramanidina miaraka amin'ny Flight Simulator 2004 sy Flight Simulator X® (amin'ny Microsoft® ary Prepar3D v1 sy v2® nataon'i Lockheed Martin®).
Amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa io ny frantsay Vokovoko Mena te maneso ny fanoloran-tena manoloana ny sembana olona, ​​mba hisarihana ny olona nankany Arc-en-Ciel ny antony; ary farany ny hahita mpanohana afaka ny energize ny fandidiana.
Fa ny Mena-Vokovoko '150th tsingerintaona, Rikoooo ary Arc-en-Ciel ny ekipa hanolotra anao ho avy nifindra sambo rehetra sy manohy ny anjara ny fikambanana ao amin'ny Aviation sy ny tantara. Izay indrindra zato taona lasa izay, Mena-Vokovoko 'fanampiana nomena ny mpiady ao WW1 noho ny fahafoizan-tena ho nandositra.
Mena-Vokovoko "Opération Arc de Ciel" ao Partership amin'ny Rikoooo
Rohy mahasoa: Page Facebook Opération Arc de Ciel
Tsindrio eo amin'ny sary mba hanitatra
Ladd-on : Entana complet avec cockpit virtuel, gauges de zanany personnalisés
Nohavaozina taminy 31 / 08 / 2018: Modely 3D niova fo FSX ary Prepar3D Ny format v4, dia namorona "texture ordinatera" (Bump), installer v10.5, fanitsiana olana maro hita maso, fanatsarana ny modely 3D, nanampy ny fanoratana ny varavarana amin'ny fomba VC.
Nohavaozina taminy 31-08-2018
Byron Warwick. FSX/P3D ny fiovan'ny natiora & repart & repack by Rikoooo.com